အခမဲ့ D3DX9_26.DLL DOWNLOAD - DLL - 2019
သငျသညျအလုပျသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ရေးအတှကျက MS နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ဆိုပါကထို program ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုအသုံးပြုရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အပြင် Microsoft ကလျင်မြန်စွာမှန်ကန်သောအမှားအယွင်းများဖို့ကြိုးစားနေနှင့်သူတို့၏အမျိုးအနွယ်၏လုပျငနျးအတွက်ချို့ယွင်းချက်ဖယ်ရှားပစ်ဒါကြောင့်သူတို့ကလည်းမှန်မှန် features အသစ်ပေါင်းထည့်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေ။
တစ်ဦးချင်းစီအစီအစဉ်၏ default settings ကိုအထုပ်အလိုအလျှောက်မွမ်းမံမှုများ install activated ဖြစ်ပါတယ် Microsoft Office တွင်ထည့်သွင်း။ သို့သျောလညျး, တခါတရံတွင်သူကလွတ်လပ်စွာဆော့ဝဲများအတွက် updates များကိုရရှိနိုင်ပါသည်ရှိမရှိအတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ, အလုပ်အတွက်မဆိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။
: အ update ကိုသည်နှင့်, တကယ်တော့, နှုတ်ကပတ်တော်ကို update လုပ်ဖို့ဤအဆင့်များအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါလျှင်စစ်ဆေး
1. Open ကိုတရားစကားတော်နှင့်အကလစ် "File".
2. အပိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ "အကောင့်".
3. အောက်မှာ "ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက်" စာနယ်ဇင်းများ "Update ကို Settings" ကို.
4. ကို Select လုပ်ပါ "Update ကို".
5. နောက်ဆုံးသတင်းများများအတွက်စစ်ဆေးခြင်းကို။ သူတို့ရရှိနိုင်ပါလျှင်, သူတို့သည်ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီးသွင်းယူလိမ့်မည်။ အဘယ်သူမျှမ update ကိုလည်းမရှိလျှင်သင်အောက်ပါမက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်:
6. ဂုဏ်ယူပါတယ်, သင်သမ်မာကမျြး၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို install ပါပြီ။
မှတ်ချက်: မည်သို့ပင်, သငျသညျကို update မည်ကို Microsoft Office ကိုအစီအစဉ်များအရာ၏, နောက်ဆုံးသတင်းများ (ရှိပါက) အားလုံးရုံးအစိတ်အပိုင်းများကို (စသည်တို့ကို Excel, PowerPoint Outlook နဲ့) မှဒေါင်းလုပ်ရယူပြီးသွင်းယူလိမ့်မည်။
အလိုအလျှောက် update ကိုစစ်ဆေးမှုများ Enable
အပိုင်းပါလျှင် "ရုံး၏အဆင့်မြှင့်" သငျသညျအဝါရောင်အတွက်မီးမောင်းထိုးပြကြပါပြီ, သင်ခလုတ်ကိုနှိပ်လျှင် "Update ကို Settings" ကို အပိုင်း "Update ကို" သငျသညျကိုပိတ်ထားရရုံးအစီအစဉ်များအတွက်ပျောက်ဆုံး, အလိုအလျောက် update ကို function ကို။ ထို့ကြောင့်, နှုတ်ကပတ်တော်ကို update နိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပေသည်။
1. menu ကိုဖွင့်ပါ "File" နှင့်ကိုသွား "အကောင့်".
ခလုတ်ကို 2. ကိုနှိပ်ပြီး "Update ကို Settings" ကို နှင့်ကို select "updates များကို Enable".
3. ဖြင့်သင့်အရေးယူမှုအားအတည်ပြု "Yes" ကို ပေါ်လာပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
အားလုံးအတွက် Microsoft Office ကိုအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ 4. အလိုအလျောက် Updates တွေကိုထည့်သွင်းနေကြတယ်, သငျသညျယခုအထက်ပေးညွှန်ကြားချက်ကို အသုံးပြု. နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကို update ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဒီသေးငယ်တဲ့ဆောင်းပါးကနေရှိသမျှတို့, ပါပဲ။ ငါတို့သည်သင်တို့အစဉ်အမြဲနောက်ဆုံးပေါ် software ကိုသုံးပါနှင့်မှန်မှန် developer များအနေဖြင့် updates များကို install ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: How to Fix Missing Error. (နိုဝင်ဘာလ 2019).